6 Waxyaabood Oo Waajib Kugu Ah Inaad Ka Ogaatid Ninka Kahor Intaadan Guur Ka Aqbalin | Aayaha
Aayaha editorNovember 19, 2018
Shantaan waxyaabood ayaa lagaaga baahanyahay inaad ka ogaatid ninka kahor inta aadan guursan oo aadan haye dhihin.
Haweenka badanaa tan uma qaataan si dhab ah illaa ay ugacan galaan nin fidnoole ah oo qalad iyo gardarro badan. Ma jiro dab aanan qiicin; waxay yiraahdaan waxaad iska xaqiijisaa dabeecaddiisa iyo sida uu uga fal celiyo xaaladdaha dhabta ah kahor intaadan ninkaas oran haye.
Ninka xushmeeya haweenka sidoo kale adigana waaku xushmeynayaa balse ninka aanan xuhsmeyn kuma xushmeynaayo adigana. Xiriir iyo guur qurux badan ayaad saldhigeysaa marka aad ninkaaga ka hesho qadarin.
Hammigiisa iyo qorshaha mustaqbalkiis
Waad arrintaan aad ninka ka ogaataa hadaad guur ka rabtid. Waa inaadan shukaansan nin aadan ogeyn qorshayaashiisa mustaqbalka. Yoolkiisa , hammigiisa iyo qorshaha mustaqbalka.
Micnaha uu guurka iyo xiriirka ugu fahdiyo
Inkastoo rag badan ay ku qiyaanayaan markaad weysdiisid su’aashaan, balse si aad uhesho jawaabta arrintaan,waa inaad eegtaa waxa uu sameeyo balse ma ahan waxa uu dhaho.
Kalsoonida waa muhiim. La haasaawidda nin aanan daacad ahayn waa sida adigoo wadnahaaga galiyay dab, dabcan waligaa ma nasan doontid. Ninkaaga ha noqdo mid aamin ah. Mar hadduu la yimaado calaamadaha beenta iyo qiyaanada, dhib malahan siduu u qurxanyahay xaqiiq waxaa ah inuusan waxba kuu galeyn aamina ahayn.